Minsk Tarakita Inoshanda yakaburitsa a Video netirakita yayo nyowani - inozvimiririra BELARUS А3523і. Drone inorima zvine chivimbo mumunda.
Wepamutemo kuratidzira kwekutanga tarakita yeBelarusian isina kurongwa BELARUS А3523і yakaitika muna Chivabvu 29 pamhemberero yakatsaurirwa kusvitsa makore makumi manomwe nemashanu eMinsk Tractor Plant, yakaitika kuChizhovka Arena. Ikoko, pane yakasarudzika yakakomberedzwa saiti, BELARUS А75і mune yekuzvimiririra mashandiro maitiro akateedzera mashandiro ekukohwa mahebhu ane modular anotenderera mower.
Uye pano iwe unogona kuona chimedu cheyedzo ye "drone" iri kushanda ne 8-furrow inodzoserwa gejo, inova imwe yemabasa akaomesesa ekurima. Uye heino BELARUS А3523і pachayo, yakagadzirirwa dizeli-yemagetsi (hybrid) gwenya remagetsi rine huwandu hwe350 hp. uye hutachiona hwemagetsi. Sezvo isu inotarisirwa , iyo "drone" ine zvakawanda zvakafanana nemagetsi-anonyanya-simba matirakita emhuri ye3522 / 3525.
Zvakadaro, BELARUS А3523і muchina mutsva. Pamwe chete neiyo yemagetsi yemagetsi dura, electromechanical inoramba ichishandurwa hutachiona yakashandiswa mukugadzirwa kwetirakita yakazvimiririra, iyo yakabvisa yakanangana nekinematic kubatana kweinjini yedhiziri nemavhiri ekutyaira. Izvi zvakaita kuti zvikwanisike, pasimba rakapihwa, kuti ione kumhanya uye torque mumamiriro ekunyanyisa kwemafuta. Nekuda kweizvozvo, mafuta anoshandiswa panguva dzekurima anoderedzwa ne7%, uye panguva yekufambisa - kusvika ku12% (kana ichienzaniswa nematirakita akafanana neanotakura michina) Uye zvakare, iwo mwero wekubuda kwezvinhu zvinokuvadza wakadzikiswa kagumi.
Sezvauri kuona, tarakita yakazvimiririra haidi tekisi. Nekuti iyo BELARUS А3523і inodzorwa neyemagetsi system iri kure inotarisa mashandiro ehurongwa hwese uye zvikamu zve tarakita. Sekureva kwedata kubva kune traffic traffic sensors uye uchifunga nezvekubatana basa neiyo chaiyo yekurima yekufambisa system, iyo yakazvimiririra yekudzivirira system inozvimiririra inoita zvisarudzo nezve kudiwa kwekutyora kana nezve kudzivisa chipingamupinyi chaitika. Muchiitiko ichi, chiratidzo chekanzwi chinopihwa uye meseji inotumirwa kune anoshanda kune remote control.
Tags: self autonomousBHERARUSIDrone magejo
Europlant inowedzera inowedzera mbeu mbatatisi yekuchengetedza uye logistics
McDonald's Chikunguru Akaenzaniswa Kutengesa kumusoro kuUS, pasi kumwe kunhu